Fiantsenana any Thailand ~ Journey-Assist - Inona no hividy any Thailandy
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Fiantsenana any Thailand
7 Aogositra, 2019
Momba ireo endrik'ireo miantsena ao amin'ny faritra tsirairay any Thailand, dia hiresaka amin'ny fizarana mety ho an'ireo faritra ireo isika fa eto kosa dia hanao famerenana ankapobeny amin'ny fivarotana amin'ny teny Thai! 🙂
Endrika fiantsenana any Thailand
Fivarotana any Thailand (maraina, hariva, alina)
Fihenam-bidy sy varotra any Thailandy
Inona no tokony hoentina avy any Thailand?
Zavatra sy kojakoja
INDRINDRA INDRINDRA aondrana any Thailand
Thailand no foibe ara-barotra lehibe indrindra any amin'ny faritra Azia Atsimo Atsinanana. Azo atao ny mividy ny zava-drehetra eto, fa ny malaza indrindra dia lamba, akanjo, firavaka, perla, souvenir, vokatra sakafo. Ny vidiny eto amin'ity firenena ity dia hampifaly ny rehetra, satria eto amin'ity firenena ity dia misy sampana maro ny marika lehibe sy malaza indrindra eto an-tany.
Ny faritra tsirairay any Thailand dia samy manana ny mampiavaka azy amin'ny fiantsenana. Ao Bangkok, ny tena fahita indrindra dia ny fitaovana elektronika vaovao sy ny fanatanjahan-tena. Ho fanampin'ny fivarotana sy ny boutika amin'ny orinasa asiana malaza, misy ny mahita ny marika malaza toy ny Nike, Adidas, Puma, Carlo Pazolini, Marks & Spencer, sy ny maro hafa. Tena mifaninana ny vidiny ao. Fa amin'ny ankapobeny, dia ilaina ny mihevitra fa ny entana nataon'ny Thais dia matetika tsy ambany amin'ny kalitao amin'ny zavatra voamarika, ary tsy tokony hohadinoinao izy ireo.
Pattaya Malaza amin'ny souvenir isan-karazany, akanjo vita any an-toerana, ary fitaovana maro.
Any amin'ireo nosy Phukeт и Samui Ireo mpanisa dia voasarona amin'ny landy, vita tànana, vita amin'ny lamba ary voankazo exotic.
Ary saika na aiza na aiza, ankoatra ny zavatra hafa, dia afaka mahita vokatra amidy avy amin'ny hoditry ny biby exotic ianao, manasitrana balsika sy makiazy Thai avy amin'ny akora voajanahary.
Ankehitriny kely kokoa momba izany
Ny ivom-barotra an-tsena ao amin'ireo tanàn-dehibe, ary koa amin'ny trano fandraisam-bahiny, dia misokatra isan'andro amin'ny 10 ka hatramin'ny 22 na 23. Tsy misy fiatoana antoandro na faran'ny herinandro. Ny fivarotana kely sy ny fivarotana kely dia manana ny fandaharam-potoanany manokana. Mifarana amin'ny 18 na 19 ora ry zareo.
Thailand dia olona tena milamina, noho izany, na dia rehefa miteny aza ny varavarana fa misokatra amin'ny 9 ny fivarotana, dia matetika miseho 1 na 2 ora eo ilay mpivarotra. Tsy tokony handeha any amin'ny fivarotana tsy miankina (tsy misy tamba-jotra, toy ny 7-Eleven sy Family Mart) ireo magazay manokana sy boutika tsy miankina, dia tsara kokoa ny ho tonga 3-4 ora mialoha kokoa amin'ny fotoana fanidiana ny anarana.
Ny foibe fivarotana saina dia tsy tokony hihoatra lavitra. Tena mitombina ny vidiny, midadasika be ihany koa ny assortment. Izy ireo dia afaka manome fahafaham-po ny filan'ny mpanjifa :). Midira kosa, ianao mihitsy no hahafantatra ny zava-drehetra. Tsy ambany izy ireo, na lehibe kokoa aza, amin'ireo toeram-pivarotana maro any amin'ny firenena hafa.
Fivarotana fivarotana 7-Eleven eto Thailand
Ny 7-Eleven sy Family Mart dia tena tsara ao amin'ny sokajy misy azy ireo. Ity dia rojo fivarotana manerana ny firenena. Izy ireo dia kely ary ny karazany dia ahitana ny vokatra sy ny entana.
Fivarotana FamilyMart trano fivarotana any Thailand
Ny tombotsoan'izy ireo lehibe dia ny vidiny sy ny vidiny. Hita isaky ny dingana amin'ny toerana fizahan-tany izy ireo.
Ireo izay maniry hifankahita amin'ny lafiny tsy mpizaha tany any Thailand dia tokony handinika tsara ireo magazay kely tsy manaitra ho an'ny mponina any an-toerana. Feno tontolo iainana aziatika, tsara tarehy sy tsotra :). Ambany ny vidiny (ho azy ireo) ary amidy ny sakafo sy ny tena ilaina. Ireo fivarotana toy izany dia, mazava ho azy, eny an-dalambe dia tsy malaza amin'ny mpizahatany. Misy be dia be amin'izy ireo ary tena diso fanantenana ry zareo.
Fivarotana any Thailand
Ranki any Thailand dia zavatra mahaliana sy mahaliana. Ary izy ireo ihany landmark thailand!
Ireo tsena eo an-toerana dia ireo toerana miloko isan-karazany izay ahafahanao mianatra amin'ny antsipirihany ny fiainam-piainan'ny mponina ao an-toerana, satria maro ny Thai no miaina mivantana amin'ny tombom-barotra amin'ny fivarotana entana, eny am-pivarotana saika isan'andro.
Misy karazany telo ny tsena ao Thailand.
Ny maraina (manomboka amin'ny 7 a.m ka hatramin'ny 12 p.m.)
Hariva (15 ka hatramin'ny 20)
Amin'ny alina (manomboka amin'ny 20 ka hatramin'ny misasak'alina)
Ary any Bangkok dia mbola misy tsena hafahafa amin'ny rano. 🙂
Matetika ny tsena maraina dia mifantoka amin'ny faritra eo an-toerana. Ny ankamaroany ny voankazo sy ny ilaina dia amidy. Ary amidy amina toy izany ... tsy mahazatra - fomba tsy nahazatra fa tsara kokoa ny tsy mahita vehivavy saro-kenatra :).
Ny voankazo izay tsy mahasalama manokana dia mety hiparitaka amin'ny gazety na eny an-kianja fotsiny. Ny zava-manitra dia amidy am-pahavitrihana eto, tsy hipetrahana anaty kitapo marevaka tsara tarehy. Eny, amin'ny tsena toy izany dia misy maro be ny eto an-toerana, izay tena mahaliana sy mahaliana (tsikitsoratry ny mpanoratra). 🙂 Tsy dia mitsidika tsena toy izany ireo mpizahatany, afa-tsy ny manadihady loatra.
Ireo tsena ireo dia tsara ho an'ny mpizahatany izay te hividy zavatra matsiro na tsara tarehy. Tena fanjakan'ny mpivarotra sy mpividy izany :). Ny zavatra rehetra dia tena mahafinaritra, marevaka ary maro loko.
Ao amin'ny tsena toy izany no ahitanao ny zavatra rehetra irin'ny fanahy. Avy amin'ny akorandriaka tsara tarehy hatramin'ny balsama mahagaga avy amin'ny poizina bibilava, avy amin'ny aretina rehetra eto amin'izao tontolo izao :). Ary eto dia ny tena mifantoka indrindra amin'ny souvenir isan-karazany.
Ny tsenan'ny alina
Betsaka ny tsenan'alina - any amin'ny ivom-pizahantany, trano fandraisam-bahiny ary faritany kely. Tian'izy ireo ny toerana toy izany, eto izy ireo no miala sasatra sy mifanerasera, matetika miaraka amin'ny fianakaviana manontolo na orinasa lehibe. Mazava ho azy fa malaza an-dry zareo mpizahatany ireo tsena ireo. Eo an-tsena, ireo karazana fampisehoana teatra amin'ny fialam-boly dia matetika atao.
Ao amin'ny tsenan'ny alina, ary koa amin'ny hariva, dia afaka mandamina fivarotana tena amin'ny teny Thai :) ianao.
Manana ny zavatra rehetra irin'ny fanahy koa izy. Ny sehatra atolotry ny tsena toy izany dia tsara ary mifantoka manokana amin'ny filan'ny fizahan-tany. Souvenir, kilalao tsy mahazatra, asa tanana, akanjo, kojakojan-trano, voankazo, kojakoja ary maro hafa no amidy. Misy tsena sy tery kely toy izany. Ohatra, ny voninkazo, asa tanana na zavakanto, na tsena izay amidy any amin'ny faritra iray ihany no amidy.
Ny fiheverana manokana dia aloa amin'ny tsenan'ny sakafo amin'ny alina. Izy ireo dia mitodika ara-bakiteny noho ny be dia be amin'ny hazan-dranomasina matsiro indrindra, legioma sy voankazo. Ny ampahany lehibe amin'ny tsena dia mety natokana amin'ny sakafo efa vonona.
Ny lazaina fitsapan-tsakafo. Ny sakafo ao aminy dia mety ho mampiavaka ny fizahan-tany efa tsy vonona (ohatra, ny voangory atody, ny valala miaraka amin'ny maingoka na ny voankazo mamy mihosotra amin'ny zava-manitra mafana). Fa misy sakafo mahazatra kokoa, mazava ho azy. Salady maro isan-karazany, vary efa natsofoka tamin'ny endriny isan-karazany, sakafo an-tsakafo an-tsakafo, hatsembohana amin'ny andrana tsy manam-petra ary maro hafa.
Thailand dia firenena malala-tanana, ary ho an'ny tafika mpizahatany matanjaka an-tapitrisany, dia mandany andro fialan-tsasatra tena izy io. Miresaka ny varotra lehibe midadasika izahay.
Ny tena malaza amin'ireo hetsika ireo dia ny Granding Thailand Grand Sale isan-taona, izay manomboka amin'ny tapaky ny volana jona ka hatramin'ny tapaky ny volana aogositra. Nandritra io vanim-potoana io dia nanerana an'i Thailand, saika ny fivarotana lehibe rehetra, fihenam-bidy 10 ka hatramin'ny 80%. Ankoatr'izay, ny fihenam-bidy dia tsy natao ho an'ny entana ihany, fa ho an'ny serivisy isan-karazany malaza ao amin'ny firenena (ohatra, fomba fandroana na fandidiana plastika ihany koa).
Tahaka izany koa, nanomboka ny fiandohan'ny volana Janoary ka hatramin'ny fiandohan'ny volana febroary, dia varotra ny Krismasy.
Ireo fivarotana mandray anjara amin'ny varotra toy izany dia mora eken'ny famantarana amin'ny teny hoe "Amazing Thailand Grand Sale".
Ny fihenam-bidy lehibe any amin'ny fivarotana any Thailand dia voatokana amin'ny fialantsasatra maro. (Ianaro bebe kokoa momba ny fialantsasatry ny Thailand eto.).
Tsy vitsy ny lohahevitr'ity lohahevitra ity, ka andao hizarazara ny sokajy amin'ny sokajy:
Thailand dia firenena manankarena amin'ny karazany isan-karazany voankazo hafakelytsy ao amin'ny latitude afovoany izany. Rehefa avy manandrana azy ireo any ianao dia mety te-hitondra azy ireo kely amin'ny faran'ny fialantsasatra. Lalàna roa lehibe ho an'ny fitaterana voankazo:
fonosana mafy. Mba hanaovana izany, misy harona plastika mihidy manokana misy lavaka. Azonao atao ny mividy ireo any amin'ny tranombarotra lehibe.
Raha toa ka lava ny sidina dia tokony halaina kely ny voankazo. Raha tsy izany, dia tena mahavita ny hahatongavany izy ireo.
Ny voankazo malaza indrindra amin'ny fanondranana dia mango, mangosteen, hazo mamy, lychee, rambutan, anans (eny, ireo kesika any Thailand dia tsy ao anatin'ireo mpivarotra afovoany.
FORBIDDEN !!! makà voankazo matanjaka indrindra Durian (noho ny fofony mofona incredible) ary tsy azo atao ny manondrana voaniho (satria tsy hitan'ny mpitsikilo any amin'ny seranam-piaramanidina izy ireo, ary indray mandeha dia olon-dratsy no nampiasa azy io hitaterana zava-mahadomelina).
Vakio bebe kokoa momba izany voankazo any Thailand, ohatrinona ny vidiny ary rehefa manana vanim-potoana izy ireo dia azonao fantarina eto 🙂
Whisky sy tsaho vita eo an-toerana no malaza amin'ny mponina any amin'ny faritra avaratra.
Tandremo ihany koa amin'ny ranom-boankazo sy divay voaniho.
Ny gourmets eto dia afaka mahita tincture exotic tena amin'ny maingoka sy bibilava, izay ampidirina amin'ny fanafody.
Ny mampiavaka ny kosmetika Thai dia ny voajanahary. Hitanao saika ny zavatra rehetra ilain'ny vehivavy iray dia: Shampoos, fikosehana, creme mony ary maro hafa. Fa ny tena tokony hoentinao tsara dia menaka voanio. Manana toetra mahatalanjona izy. Ankoatr'izay dia azo ampiasaina tsy ho vokatra kosmetika fotsiny fa amin'ny fandrahoan-tsakafo koa dia tsy ho ratsy :). Mora kokoa ny mividy azy any amin'ireo fivarotana lehibe.
Ny balsoa Tiger koa dia tena malaza any Thailand. Ny fananana fanasitranana mahagaga dia vokatr'ity fanafody ity. Manampy amin'ny fahasosorana sy fanaintainan'ny tonon-taolana izany.
An-toerana any an-toerana hypoallergenic tanteraka deodorant.
Ny savony amin'ny endrika voankazo dia ilaina ihany koa, toy ny fahatsiarovana
Izany rehetra izany dia hita ao amin'ny fivarotana lehibe rehetra, ao amin'ny tsena fivarotana 7-Eleven, Family Mart ary Tesco Lotus, ary koa amin'ny tsenan'ny hariva sy ny alina.
Souvenir any Thailand
Betsaka ny souvenirs samy hafa eto ...
Ny sary sokitra samihafa namboarina tamin'ny hazo, taolana. (Bouddha, elefanta, sahona, sisan-javamaniry vatan'olombelona ho an'ny aesthetes)
Lafin-tsasatra amin'ireo endrika hafahafa.
Sets Tea Tea
Zava-manitra. Misy lehibe amin'izy ireo
Perla sy firavaka vita aminy
Asa-tanana amin'ny akorandriaka
Mazava ho azy fa misy magnets amin'ny ambaratonga tsy tambo isaina
Takelaka vita sokitra (tsy mitovy any Bali, fa tena mahavariana)
Savony mahafatifaty 🙂
Ny vidin'ny akanjo sy ny fitaovana vita amin'ny famokarana eo an-toerana dia tsy hamela tsy hahalala ireo shopaholics na koa tia zavatra mahafinaritra.
Ny karazana sun sunes rehetra
Ny hoditra vita amin'ny hoditra na mavesatra na stingray
Landy vita tanana vita tanana
Teraka eto ny silk Thai
Tena onja be ny onja vita any an-toerana
Izany rehetra izany dia azo vidina ao amin'ireo tsenan'alina sy hariva mitovy manerana an'i Thailand :).
Voarara ny manondrana any Thailandy
Ny akorandriaka sy ny haran-dranony
Tany, vato sy fasika avy amin'ny tora-pasika
Vokatra avy amin'ny akorandriaka sy korana
Tranon-tsoavaly vita kitay
Asa zavakanto nasionaly
Souvenir avy amin'ny voangory, lolo sy ny ramanavy
Ny hoditry ny tigra, ary koa ny sombiny
Sary an'ohatra Buddha no mihoatra ny 15cm
Sarin'ny Buddha na Bodhisattvas
Voankazo sy voanio.
Vatosoa sy firavaka tsy misy taratasim-bola na fahazoan-dàlana.
Tsy voalaza ny hampiasa ny serivisy fivarotana ao amin'ny hotely (misy izany), satria natao ho an'ny mpizahatany tsy manam-pahaizana izay vao avy nandalo teto. Ny vidiny matetika dia be loatra, ary ny assortment azo inoana dia tsy hamiratra na isan-karazany na kalitao.
Tsara ny manadihady fa ny fitsangantsanganana am-pahavitrihana tsy dia lafo matetika dia ny fitsidihana ireo orinasa sasany, ary eny an-dalana ho any amin'ny fivarotana azy ireo (matetika dia orinasa ondana sy kasety, tranom-borona, teas, firavaka, ary maro hafa). Eto dia tsy voalaza fa ilaina ny mividy na inona na inona ... Raha tsy izany, ny ampitso dia afaka mahita zavatra mitovy eny an-tsena, fa ny antsasaky ny vidiny.
Fa na izany aza anefa dia tokony homarihina fa ny tsy mampivaro-po miampy ny orinasa dia ny fahamarinan'ny vokatra ampiroboroboana. Ary raha mila zavatra manokana ianao, noforonina na namboarina manokana ho anao (ohatra, avy amin'ny firavaka), dia afaka manao izany ny orinasa. Manome fanamarinana momba ny maha-azo itokiana azy.
Raha tianao ny zavatra mafy ao amin'ny tranobe na amin'ny magazay, fa ny mpivarotra dia tsy te-hanao fihenam-bidy eo, dia mandeha any amin'ny fivarotana na amin'ny tsena hafa. Ny fahafahana mahita mitovy ilay vokatra miaraka amin'ny vidiny ambany dia avo be.
Eo an-tsena dia tokony hiara-miasa foana ianao tsy misy fisalasalana. Tokony hatao am-po tsara izany, sady mitsiky ary mampiseho toe-tsaina tsara.
Raha hialana antikety avy amin'ity firenena ity dia tsy maintsy manana fahazoan-dàlana manokana avy amin'ny sampana misahana ny zavakanto eo an-toerana ianao. Mitovy ihany ny toe-javatra misy zavatra ara-pivavahana: mba hivoahana azy, dia tsy maintsy mahazo alalana avy amin'ny departemantan'ny foto-pinoana Thai ianao. Ny antontan-taratasy toy izany dia miantoka ny maha-ara-dalàna io entana io ary miaraka amin'izay koa dia manaporofo ny maha-ara-dalàna ny fividianana azy.
Izay fitsangatsanganana any Thailand dia tsy misy dikany raha tsy miantsena. Na ny mpandeha izay manana teti-bola tsy mifanaraka amin'ny fividianana manan-danja aza dia afaka mividy trinkets kely, kitapo lamba firakotra na dika mitovy amin'ny famantaran'ny mpamokatra.
Ny tena mila mitondra tsiky anarivony maro ho an'ny firenena dia tanany mahafinaritra, toe-po tsara ary ranomasina angovo!
Voarara ny manondrana any Thailandy !!!